हाम्रो पनि छ भ्यालेन्टाइन्स् डे « नेपाली मुटु
« एमालेका घुस्याहा सभासद हिरासतमा
डा. बाबुराम भट्टराई चढेको गाडीमा शंकास्पद (?) ठक्कर »
आज कृष्ण अष्टमी । भगवान् बिष्णुको आँठौ अवतार, चञ्चल कृष्णको जन्मदिन । भगवानहरुमा कृष्ण जति चकचके कोही थिएनन् रे । आफ्नो मुहार, बोली र बाँसुरीले संसारलाई मोहमा राख्न सक्थे रे । मोहको कारणले उनको जन्म जेलमा भएपनि उनलाई जेलबाट गोकुलमा पु¥याएको कसैले थाहा पाएनन् रे । यसैले आजको रातलाई मोह रात्री पनि भनिन्छ । उनका रानी मात्रै १६ सय भन्दा बढि थिए रे । प्रेमको पयार्यवाचीका रुपमा पनि उनलाई लिने गरिन्छ । यसैले आजको दिनलाई पश्चिमा भ्यालेन्टाइन्स् डे सँग पनि तुलना गर्ने गरिन्छ । हामी संस्कृति प्रेमीहरुले आजको दिनलाई प्रेम दिवसका रुपमा मनाईदिए हाम्रो संस्कृति मै भएको कुरा पश्चिमा संस्कृतिबाट सापट लिइ रहनु पर्ने थिएन कि !
महाभारतको युद्धमा उनले अर्जुनलाई दिएको उपदेश र दिव्य ज्ञानलाई गीताको रुपमा हिन्दु धर्मालम्बीले पुज्य ग्रन्थको रुपमा लिने गर्दछन् । जीवन र जगतको सम्पुर्ण गाँठो फुकाउँन सक्ने भनेर यो ग्रन्थ निकै चर्चित पनि छ ।
This entry was posted on September 1, 2010 at 3:56 pm	and is filed under कला संस्कृति. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “हाम्रो पनि छ भ्यालेन्टाइन्स् डे”
तर हामीलाई त रोटी भन्दा पिज्जा नै मन पर्छ नि त